I-Piwik: I-Open Source Web Analytics | Martech Zone
I-Piwik: I-Open Source Web Analytics
ULwesine, May 8, 2014 NgoLwesine, Novemba 6, 2014 Douglas Karr
Piwik kuvulekile analytics ipulatifomu njengamanje esetshenziswa ngabantu, izinkampani kanye nohulumeni emhlabeni wonke. Nge-Piwik, idatha yakho izohlala ingeyakho njalo. I-Piwik inikeza isethi eqinile yezici ezibandakanya imibiko ejwayelekile yezibalo: amagama angukhiye aphezulu nezinjini zokusesha, amawebhusayithi, ama-URL ekhasi eliphezulu, izihloko zamakhasi, amazwe abasebenzisi, abahlinzeki, uhlelo lokusebenza, i-browser markethare, ukulungiswa kwesikrini, i-desktop VS mobile, ukuzibandakanya (isikhathi esizeni , amakhasi ngokuvakasha ngakunye, ukuvakashelwa okuphindwayo), imikhankaso ephezulu, okuguquguqukayo ngokwezifiso, amakhasi aphezulu okungena / okuphuma, amafayela alandiwe, nokunye okuningi, okuhlukaniswe ngezine ezinkulu analytics imikhakha yokubika - Izivakashi, Izenzo, Abadlulisi, Izinjongo / i-e-Commerce (imibiko engama-30 +).
I-Piwik ibuye inikeze ngezinsizakalo zobungcweti kanye nesisombululo esisingathiwe esibizwa ngokuthi I-Piwik Pro lapho isibonelo sakho sePiwik siphethwe futhi silawulwa efwini. Nasi isigqebhezana sokubambisana se- I-30% OFF ukubhaliswa kwezinyanga eziyi-6 yazo zonke izinhlelo zePiwik Cloud.
Izici zePiwik Web Analytics
Ukuvuselelwa kwedatha yesikhathi sangempela - Buka ukugeleza kwesikhathi sangempela sokuvakashelwa kuwebhusayithi yakho. Thola ukubuka okuningiliziwe kwezivakashi zakho, amakhasi abavakashele kanye nezinhloso abazibangele.
Yonke Ideshibhodi Yamawebhusayithi - Indlela enhle yokuthola ukubuka konke okwenzekayo kuwo wonke amawebhusayithi akho ngasikhathi sinye.
Irowu Evolution - Idatha yamanje neyedlule yemethrikhi yanoma yimuphi umugqa kunoma yimuphi umbiko.
Izibalo ze-e-commerce - Qonda futhi uthuthukise ukubonga kwakho kwe-inthanethi kwi-e-commerce esezingeni eliphakeme analytics izici.
Ukulandelwa kwemigomo yokuguqulwa - Landela okuguquguqukayo kwesiko bese ubona ukuthi uhlangabezana nezinhloso zebhizinisi lakho lamanje.
Ukushintshwa kwamakhasi - Buka ukuthi izivakashi zenzeni ngaphambi nangemva kokubuka ikhasi elithile.
Ijubane lesiza nemibiko yejubane lamakhasi - Ugcina ithrekhi yokuthi iwebhusayithi yakho ikuletha ngokushesha kangakanani okuqukethwe kuzivakashi zakho.
Landelela ukuxhumana okuhlukile komsebenzisi - Ukulandelela okuzenzakalelayo kwe- okulandwayo kwamafayela, uchofoze izixhumanisi zangaphandle zewebhusayithi, ukulandelela okungakhethwa kwe 404 amakhasi
Tags: umthombo ovulekileizibalo zomthombo ovulekileimithombo evulekile yezibalo zewebhuPiwikpiwik proIsibongo Sakho